संयुक्त राष्ट्र संघ « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको सबै राष्ट्रमा सोमबार ‘अन्तर्राष्ट्रिय बैशाख दिवस’ बुद्ध जयन्ती मनाईएको छ । बुद्ध जयन्तीको अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघले विगत २० वर्ष देखि बुद्ध जयन्ती मनाउन्दै आएको हो
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेनले म्यानमारको कायह राज्यमा जलेको अवस्थामा फेला परेका ३५ शवमध्ये २ वटा शव आफ्ना कर्मचारीको भएको पुष्टी गरेको छ । सेभ द चिल्ड्रेनले
कूटनीतिक क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ : भीम रावल
काठमाडौं, कात्तिक ७ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले नेपालले कूटनीतिक क्षेत्रलाई सबैभन्दा सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । उपाध्यक्ष रावलले देशको पहिचानलाई विश्वसामु पु¥याउन पनि नेपालले कूटनीतिक क्षेत्रलाई
परराष्ट्रमन्त्री डा‍. खड्काबाट संयुक्त राष्ट्र संघको ७६ औं महासभालाई सम्बोधन
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले विश्वका ४५ लाख मानिसले कोभिड १९ का कारण ज्यान गुमाएकाप्रति गहिरो दु:ख व्यक्त गर्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको ७६ औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै
तापमान वृद्धिले मानव जाति ठूलो संकटमा रहेको वैज्ञानिकहरुको निष्कर्ष
एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले मानवजातीले भयंकर ठूलो संकटको सामना गर्नु पर्ने चेतावनी दिएको छ । जलबायु परिवर्तनका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तरसरकारी अध्ययन समितिले गरेको अध्ययनले
संयुक्त राष्ट्रसंघको चेतावनी- २०३० सम्म १.५ सेन्टिग्रेड तापक्रम बढ्ने, मानवले ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्ने
बढ्दो तापमानका कारण विश्वभरमा मौसमसँग जोडिएका विपद्ले गम्भीर आपतका घटनाहरु सामने आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वायुमण्डललाई तताउने ग्यासको उत्सर्जन जुन रूपले भइरहेको छ त्यसले गर्दा अबको दुई दशकमै तापमानले
म्यानमार सैन्य शासकविरुद्धको राष्ट्रसंघीय प्रस्तावमा नेपाल ‘तटस्थ’ बसेकामा जवाफदेहिता निगरानी समितिद्वारा खेद व्यक्त
काठमाडौं, असार ९ । म्यानमारको सैन्य शासकविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघले साधारण सभामा पेश गरेको प्रस्तावमा नेपाल ‘तटस्थ’ बसेकाप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले खेद व्यक्त गरेको छ । तटस्थ रहने निर्णय सच्याउँदै
नेपाली सेनालाई संयुक्त राष्ट्र संघबाट उच्च प्रशंसा
काठमाडौं, जेठ २० । नेपाली शान्ति सैनिकहरुले पुर्याएको योगदानलाई संयुक्त राष्ट्र संघबाट उच्च प्रशंसा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाली सेनाको दक्षिण सुडानमा तैनाथ कालीध्वज गण, शान्ति सेना,
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने राष्ट्रसंघको प्रक्षेपण
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यस वर्ष नेपालको वृद्धिदर माइनस शुन्य दशमलव एक प्रतिशतमा सीमित हुने राष्ट्रसंघको प्रक्षेपण
पर्वतीय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै
काठमाडौं । आज, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । पर्वतीय क्षेत्र नै पानीको मुख्य स्रोत भएकाले यसको संरक्षणमा जोड दिँदै आइएको छ । पिउन योग्य पानी